आजको राशिफल ( वि. सं. २०७७ फागुन ६ गते बिहीबार) - Rastrakokhabar
आजको राशिफल ( वि. सं. २०७७ फागुन ६ गते बिहीबार)
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०९:२०
छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीसाथ काम लिनुहोला। फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। व्यवसायमा लगानी थप्नुपर्ने हुन सक्छ। खर्चिलो काम थाल्नाले धेरै रकम जुटाउनुपर्ला। तत्काल फाइदा लिँदा लाभांश अरूलाई पनि बाँड्नुपर्ला। खर्च लागे पनि यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। आफ्नो कामको फल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्।
Previous Post	चिनियाँ ‘भेरो सेल’ खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति
Next Post	प्रचण्ड-माधव समूहले आज मानव साङ्लो बनाएर टुँडिखेल घेराउ गर्दै